National University of Physical Education na Sports nke Ukraine Nkọwa
acronym : ghota
Students (ihe ruru.) : 3000
Echefukwala atụle National University of Physical Education na Sports nke Ukraine
Jụọnụ National University of Physical Education na Sports nke Ukraine
National University of Physical Education na Sports nke Ukraine (ghota) – maara nke ọma ọ bụghị naanị na mba anyị ma na gburugburu ụwa na-buru ibu ma na-ghọtara izi nnyocha na egwuregwu center. N'akwụkwọ ya n'otu jikọtara ọzụzụ na ọzụzụ ọkachamara na-arụ ọrụ a na ubi, isi na etinyere research, na achị ọnụ nke mba na yiri na n'akụkụ profaịlụ emmepe gburugburu ụwa. A pụrụ iche ebe NUPESU, nyere ndị specificity nke mahadum, họọrọ egwuregwu, emejuputa atumatu bụghị nanị na ntụziaka nke rụọ ụmụ akwụkwọ sports, kama n'elu ihe niile, ụzọ nke ọzụzụ na Mahadum elu-klas na-eme egwuregwu, gụnyere dị iche iche afọ ama ọtụtụ ndị mmeri na-na mmeri nke Olympic Games mmeri nke ụwa n'asọmpi na European na ndị ọzọ na prestigious mba asọmpi. Anyị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, nke e hiwere na 1930, n'oge 80 afọ na gafeworonụ kemgbe ahụ pụta na-arụ ọrụ na-arụpụta ihe mara ebe dị anya Ukraine akwụkwọ ọzụzụ azụ dị iche iche egwuregwu, ọmụmụ ha, nhazi nke mmụta mmega ahụ, uka egwuregwu na egwuregwu ndị kasị elu rụzuru. A ụgbọ okporo ígwè pesonel bụghị naanị n'ihi na anụ ụlọ owuwu nke ụlọ ọrụ, ma n'ihi na ọtụtụ ndị mba ọzọ si dị iche iche mee nke mbara ala anyị. Ya dị ebube akụkọ ihe mere eme nke mahadum malitere – dị ka State Institute of Physical Culture na Ukraine – Kharkiv, nke dị mgbe ahụ na mmalite afọ ndị 30, bụ isi obodo nke Ukraine SSR. na na 1944 ọ e bufere Kyiv, na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na aha ya – Kyiv State Institute of Physical Culture. -Eto eto ọ bụghị naanị nke ukwu kamakwa àgwà, guzobe ememe e mesịrị, ná mmalite 90-ies nke XX narị afọ – ọbụna onwe Ukraine – ghọrọ a mahadum na a isi alụmdi agụmakwụkwọ ka elu oru na mba anyị, na na 1998 natara mba ọnọdụ, na deservedly kwuru ịrịba onyinye mgbasa nke mahadum sports ije na mba anyị, mmepe nke agụmakwụkwọ ka elu na nnyocha sayensị, ọzụzụ nke ukwuu ruru eru pesonel na elu-klas na-eme egwuregwu. Taa National University of Physical Education na Sports nke Ukraine gụrụ akwụkwọ banyere puku atọ ụmụ akwụkwọ, na-akwadebe ha maka ihe 300 nkụzi, nke onye banyere 40 – dọkịta na ndị ọkachamara, karịrị 100 – PhD na osote prọfesọ.
Admission usoro na National University of Physical Education na Sports nke Ukraine
E nwere nanị ole na ole nzọụkwụ maka mbanye na Ukraine:
Họrọ usoro ị ga -amụ
Họrọ mahadum ka ị mụọ
Tinye akwụkwọ na mahadum Ukraine
Nweta akwụkwọ ịkpọ oku sitere na mahadum
Nweta visa na ụlọ ọrụ nnọchi anya Ukraine
Bịa na -amụ na Ukraine
Faculty of Olympic na Professional sports;
Faculty of ahụ ike na anụ ahụ agụmakwụkwọ;
Joint Faculty na nkwadebe nke ndị dibịa maka anụ ahụ na omenala na egwuregwu (tinyere Bogomolets National Medical University);
Faculty of extramural (anya mmụta) na Postgraduate Education.
The mahadum mepere 1930 dị ka National Institute of Physical Education of Ukraine na Kharkiv. na 1944 na ulo akwukwo a kpọfere Kiev ma gbanwee aha ya ka Kyiv State Institute of Physical Education. Mgbe nnwere onwe nke Ukraine, na 1995 na mahadum e reorganized na Kyiv National University of Physical Education, nke na 1998 enwetara ọnọdụ nke mba na nakweere aha nke National University of Physical Education na Sport nke Ukraine.
Ị chọrọ atụle National University of Physical Education na Sports nke Ukraine ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
National University of Physical Education na Sports nke Ukraine na Map
photos: National University of Physical Education na Sports nke Ukraine ukara Facebook
National University of Physical Education na Sports nke Ukraine reviews
Jikọọ na-atụle nke National University of Physical Education na Sports nke Ukraine.